Shiinaha Bupleurum soosaarayaasha xididka iyo alaabada | HEX
hargabka iyo qandhada, qabowga iyo kuleylka is weydaarsiga, duumada, hakadka beerka, laabta iyo feeraha xanuun, futada oo fiiqan, soo baxsashada makaanka, caadada oo aan caadi aheyn
Bupleurum, waa magaca dawada Shiinaha. Waa daawo dhireed lagu soo daray "Farmashiyaha Shiinaha". Qaybta dawada waa xididka qalajiyey ee Bupleurum ama Bupleurum angustifolia. Qod inta lagu jiro guga iyo deyrta, ka qaad jirridaha, caleemaha iyo jiifka, oo qalaji. Bupleurum waa dawada sunta ee inta badan la isticmaalo. Sidoo kale loo yaqaan qiiqa dhulka, khudradda buuraha, cawska boqoshaada, xaabada, waa mid dabiici ah oo dhadhan fiican leh, xoogaa qabow, waxaana iska leh beerka iyo xameetida. Waxay leedahay saameyn iswaafajinta dibedda iyo gudaha, beerka dejiso iyo kor u qaadista yang. Waxaa loo adeegsaday hargabka iyo qandhada, qabowga iyo kuleylka, duumada, fadhiisiga beerka iyo qi, xanuunka daran, dib udhaca, soo dhaca makaanka, caadada oo aan caadi aheyn.
Hore: Tabeelaha bislaaday
Caleenta guud ee caadiga ah